Boqolaal kun ayaa isugu soo baxay magaalada London, iyagoo dalbanaya afti cusub… – Hagaag.com
Boqolaal kun ayaa isugu soo baxay magaalada London, iyagoo dalbanaya afti cusub…
Posted on 20 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Boqolaal kun oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka London, kuwaasi oo ku baaqayay in afti cusub oo kale loo qaado heshiiska kama dambeysta ee xukuumada ee ka bixida Britain ee Midowga Yurub.
Dibadbaxyo ballaaran ayaa ka dhacay barxad-baarlamaanka, halkaas oo dibad-baxayaashu isugu soo uruureen, kuwaasi oo lagu qiyaasay 500,000 oo qof oo ay hogaaminayeen dhalinyaro.
Ra’iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa iska fogeysay in la qaado afti shacab oo heshiiska kama dambeysta ee looga baxayo Midowga Yurub. Banaabaxyada ayaa waxaa taageraya xildhibaano ka tirsan xisbiyada siyaasada oo kala duwan.
Ingiriiska ayaa ugu codeeyay inuu ka baxo Midowga Yurub 51.89 boqolkiiba afti la qaaday bisha June 2016.
Britain ayaa lagu wadaa in ay ka baxdo Midowga Yurub bisha March 2019.
Duqa Magaalada London, Sadiq khan ayaa sheegay : “Waxaa hadda cad in kala doorashada ra’iisul wasaaraha u dhaxaysa heshiis xun ama heshiis la’aan, tani ayaa ka soo horjeeda balamadii ay ku dhowaaqday muddo labo sano iyo bar ka hor”.